ဇာတ်လမ်းသစ်ကို အတူတွဲဖက်ရိုက်ကူးဖို့ ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ Yang Zi နဲ့ Lay Zhang
By HachiPosted on January 12, 2022 January 19, 2022
ချိုင်းနားရဲ့ ထိပ်တန်းအနုပညာရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ Yang Zi နဲ့ Lay Zhang ဟာ ရင်းနှီးကြတဲ့ မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြပါတယ်။ နာမည်ကြီးတဲ့သူများဖြစ်လို့ ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်ကို အတူတွဲဖက်ရိုက်ကူးစေချင်ကြတဲ့ ပရိသတ်များကလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒီအတွက် Lay နဲ့ Yang Zi ဟာ လေကြောင်းနှင့် အာကာသဆိုင်ရာ နည်းပညာပိုင်းကို ကျောရိုးယူထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းသစ် “North of the Sky” မှာ ပေါင်းဆုံတွဲဖက်ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ ညှိနှိုင်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဇဇာတ်လမ်းအကြမ်းဖျဥ်းကတော့.. ချိုင်းနားရဲ့ လေကြောင်းနဲ့ အာကာသဆိုင်ရာ နည်းပညာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ လူငယ်သုံးယောက် ပူးပေါင်းပြီး စွမ်းဆောင်ကြတဲ့ သိပ္ပံဇာတ်လမ်းမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လေကြောင်းဆိုင်ရာ ယာဉ်များကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူ အင်ဂျင်နီယာ An Fucheng ဟာ ချိုင်းနားမှာ နိုင်ငံတကာလေကြောင်းမြှင့်တင်ခြင်းအဖွဲ့အစည်အကြောင်းသတင်းကြားပြိးနောက် လစာကောင်းရတဲ့ နိုင်ငံခြားအလုပ်ကနေ နှုတ်ထွက်ပြီး အမိမြေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
An Fucheng နဲ့ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်မယ့်သူတွေကတော့ အကျအရှုံးများကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ Wu Tong, ကိုယ်နဲ့အထိုက်တန်ဆုံးနေရာမှာပဲ လက်စွမ်းပြချင်တဲ့ ဉာဏ်ကြီးရှင် ပရိုဂရမ်မာ Xia Feixue တို့ပါပဲ။ အထက်မြက်ဆုံးသူတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းလုပ်ကိုင်နေရတဲ့ An Fucheng အတွက် ပထမဆုံးဖန်တီးထားရတဲ့ အစီအစဉ်ဟာ ခရီးမပေါက်ခဲ့ပါဘူး။
အရဲစွန့်လွန်း အားကြီးတယ်လို့ဆိုကာ ပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ၃ ယောက်ပေါင်းပြီး ဖန်တီးမယ့်အကြံဉာဏ်သစ်တွေကတော့ ရှိနေပြန်ပါတယ်။ အရည်အချင်းပိုင်းမှာ အပြစ်ဆိုဖွယ်ရာမရှိပေမဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ ၃ ယောက်စလုံးမှာ အားနည်းချက်တွေရှိနေပါတယ်။ An Fucheng ဟာ တမူထူးခြားပြီး ဂိုဏ်းကွဲတဲ့စရိုက်ရှိတဲ့အပြင် အဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်ကိုင်ရမှာ အဆင်မချောတတ်တဲ့သူတစ်ဦးပါ။
Wu Tong က ဆုံးဖြတ်ချက်မပြတ်သားသူဖြစ်ပြီး Xia Feixue ကတော့ ကွန်ဖီးဒန့်ရှိလွန်းနေပြီး မဆင်မခြင် လုပ်တတ်တဲ့စရိုက်ရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး စရိုက်ကော ပုံစံပါ လုံးဝမတူတဲ့ ၃ ယောက်ဟာ စီမံကိန်းအတွက်ပြင်ဆင်ကြရင်း ဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲသွားမလဲ? ၃ ယောက်သား ညှိယူပြီး အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်သွားနိုင်မလား? လေ့လာသင်ယူရင်းနဲ့ စရိုက်တွေပြောင်းလဲသွားနိုင်မလား? ဆိုတာတွေကို ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
“North of the Sky” ကတော့ အခုမှ သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးဆဲဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်းနဲ့ပတ်သက်သမျှ အတိအကျလည်း မထုတ်ပြန်သေးတာကြောင့် Yang Zi နဲ့ Lay Zhang တို့ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်တာကို မြင်ရမလားဆိုတာ မသေချာသေးပါဘူး။ ပရိသတ်ကြီးတို့ကော Yang Zi နဲ့ Lay Zhang တို့ အတူသရုပ်ဆောင်ကြမှာကို မျှော်လင့်နေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Posted in Celebrity News, Chinese CelebrityTagged Chinese Update
Previous post (၉) နှစ်ကြာပြီးနောက် မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း ပြန်လည်ဆုံဆည်းနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ Nadech နဲ့ Kimmy
Next post Lai Kuanlin ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင် (၁၁) ယောက်အစုံအလင်ဖြင့် သီချင်းသစ်ထွက်လာမယ့် Wanna One